Chhaharaa | नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल ?
नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल ?
काठमाडौं । छसस । वर्तमानमा पनि राजनैतिक दलका नेताहरु कोही दक्षिणको त कोही उत्तर र पश्चिमा देशहरुका चाकडी गरि परम्परालाई निरन्तरता दिइनै रहेका छन् । प्रवृत्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्ता दिइरहेको स्पष्ट भएको छ । सत्ता कब्जा गर्नकै लागि कुनै पार्टीले दक्षिणको र कुनै पार्टीले उत्तरको चाकडी गर्नु अनि परजिवीपनाको पराकाष्ठानै है ।
नेपाली नेताहरुको यही चालाका कारण विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले मुलुकमा खेल्ने मौका पाएका छन् । वर्तमानमा पनि भारतीय ‘र’ प्रमुख र सेनापतिको सम्पन्न भ्रमण पश्चात, चीनिया विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई यही मेसोमा सर्वसाधारण जनताले हेर्ने गरेका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरु अनिर्णयको बन्दी नबन्ने र देशको सही दिशा के हो त्यो अडान नछोड्ने हो भने वैदेशिक चलखेल यहाँ पटक्कै हुँदैन । नेपालको आन्तरिक मामलामा छिमेकी मुलुक भारतबाट जबजब पर्न थाल्दछ, तबतब अर्काे छिमेकी मुलुक चीनमार्फत समेत हुने गरेको पाइन्छ । यी सब राजनीतिक दलहरुका रबैयाका कारण भएका हुन् । यसरी नेपाल विदेशीहरुको क्रिडास्थल बनेको आभाष हुन्छ । विगतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि तत्कालिन माओवादी केन्द्रले चीनसँग ५० करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको कुरा सोही समयमै सार्वजनिक नभएका होइनन् । यो त एक उदाहरण मात्र हो यस्ता संैयौ घटना नेपालीको मनमष्तिष्कमा अमिट छाप रहेर बसेको छ ।